Yehowa Adansefo Bible Adesua​—Nhyehyɛe Bi Wɔ Ho Anaa?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Batak (Toba) Bosnian Bulgarian Catalan Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Finnish French Galician Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Karen (S'gaw) Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Low German Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mongolian Myanmar Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (South Africa) Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tojolabal Tongan Tswana Turkish Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Valencian Vezo Vietnamese Wallisian Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Dabi, yɛnhyɛ obiara. Yɛne nnipa bebree asua Bible, nanso wɔmmɛyɛɛ Yehowa Adansefo. * Nea enti a yɛne wo sua Bible ne sɛ, yɛpɛ sɛ wuhu nea Bible kyerɛkyerɛ. Nea wode saa nimdeɛ no bɛyɛ de, egyina wo so. Ɛba gyidi ho asɛm a, obi nnom aduru mma ɔyarefo.​—Yosua 24:15.
Sɛ mo ne me resua Bible no, metumi de m’ankasa Bible aba?
Aane. Yɛn ani gye Kyerɛw Kronkron​—Wiase Foforo Nkyerɛase no ho paa. Enti sɛ yɛne wo resua ade na wopɛ a, yɛbɛma wo bi a wuntua hwee. Nanso sɛ wode w’ankasa Bible ba a, yenni ho asɛm. Ɛkame ayɛ sɛ Bible nkyerɛase biara a wobɛkenkan no, nkwagye ne anidaso ho nsɛm no wom.
Adɛn nti na mo ne wɔn a wɔmma mo som mu no sua ade?
Ade titiriw nti a yɛyɛ saa ne sɛ yɛdɔ Yehowa Nyankopɔn. Nea Kristofo asua no, Onyankopɔn pɛ sɛ wɔde kyerɛkyerɛ afoforo. (Mateo 22:37, 38; 28:19, 20) Yegye di sɛ akwannya biara nni hɔ a ɛsen sɛ yɛbɛyɛ Onyankopɔn “mfɛfo adwumayɛfo” na yɛaboa nkurɔfo ma wɔasua nea ɛwɔ n’Asɛm mu no.​—1 Korintofo 3:6-9.
Ɔdɔ a yɛdɔ yɛn mfɛfo nnipa nso ka ho bi. (Mateo 22:39) Sɛ yɛka anigyesɛm a yɛasua no bi kyerɛ nkurɔfo a, ɛma yɛn koma tɔ yɛn yam.​—Asomafo Nnwuma 20:35.
^ nky. 2 Nea ɛbɛma woahu nnipa dodow a yɛne wɔn sua ade no, afe 2016 no, bosome biara yɛne nnipa 10,115,264 na esuaa Bible. Nanso, wɔn mu 264,535 pɛ na wɔbɔɔ asu bɛyɛɛ Yehowa Adansefo.